माइती आएकी मेरी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिइन् तर कहिलै नफर्किने गरी अस्ताइन् ! – Online Khabar 24
माइती आएकी मेरी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिइन् तर कहिलै नफर्किने गरी अस्ताइन् !
काठमाडौं : ‘दसैंको टिका लगाउन असोज २९ गते माइती आएकी मेरी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिइन्।
घर पुगेको केही घन्टा नबित्दै उसले आ’त्मह’त्या गरी भन्दा कसरी पत्याउनु?’ मृ’तक अञ्जली गौतमका बाबु होम बहादुर गौतमले छोरीको मृ’त्यु शं’क्कास्पद भएको भन्दै शंका व्यक्त गरे।
‘उसलाई केही समस्या भए त माइतमै बस्थी होला नी? आत्महत्या नै गनुपर्ने केही विषय भएको भए हामीलाई सुनाउँदी हो। ज्वाईले दुख दिन्छ भनेर आमालाई भनेकी रहिछन्। परिवार नै मिलेर उसलाई मारेका हुन्।’ उनले भने।
चौरी देउराली ३ काभ्रेकी १९ वर्षीय अञ्जली गौतमले एक वर्षअघि गाँउ नजिकैका २८ वर्षीय लक्ष्मण मोक्तानसँग अ’न्तर जातिय प्रेमविवाह गरेकी थिइन्। तर ट्याक्सीचालक लक्ष्मण र अञ्जलीबीच विहे गरेको ६ महिनादेखी नै झ’गडा सुरु भयो। श्रीमानले वास्ता गर्न छाडेको र पटकपटक आफ्नो घर जा भन्ने गरेको भन्दै उनी माइतमा सुनाउने गर्थिन्।
विवाह गरेको १ वर्ष पनि बितेको थिएन। असोज ३० मा आफ्नै घरको कोठामा उनी मृ’त भेटिइन्। उनका बुवाका अनुसार अञ्जलीको मृ’त शरिर उनकै कोठाको पलङमा लडिरहेको थियो। घाँटिमा सल बाँधिएको थियो।
सल मिलाएर कैचीले का’टेजस्तो थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरीले घट’नाको अनु’सन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै अञ्जलीका माइती पक्ष आन्दोलनमा छन्। ‘बुहारी मा’र्न पाँइदैन, ह’त्यारालाई कारवाही गर’ भन्दै उनीहरुले जिप्रका अघि नारावाजी गरिरहेका छन्।
मृ’तक अञ्जलीका काका प्रेम गौतमका अनुसार प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हाे। प्रेम भन्छन्, ‘छोरीको शंस्कास्पद मृ”त्यु भएपछि हामीले आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दर्ता गर्न पटकपटक कोशिस गर्यौं। तर प्रहरीले जाहेरी लिएन। हामीले मानव अधिकार तथा महिला आयोग पुगेर उजुरी दियौं। अनि मात्रै घ’टनाको १४ औं दिनमा जाहेरी दर्ता भएको छ।
‘माइती पक्ष नपुगी छोरी झु”ण्डिएको सल किन का’टीयो? घट’नास्थलमा हामीलाई जान, फोटो भिडियो खिच्न समेत दिइएन। प्रहरी नै मिलेर प्रमाण नष्ट गर्यो। हामीलाई ज्वाईमाथी शंका छ। उसलाई प्र’क्राउ गरेर अनुस’न्धान अहिलेसम्म गरिएको छैन। अनु’सन्धानका न्युनतम प्रक्रियाहरु पनि पुरा गरिएन। छोरी मार्ने ज्वाई निस्फिक्री गाँउघर डुलिरहेको छ। हामीलाई न्या’य पाउनबाट वञ्चित गर्न मिल्छ?’,उनले भने।
माइत आउँदा पनि आमालाई सबैजनासँग कुरा गर्नु छ भन्थिन्। दसैंमा मिलेर बस्ने र पछि कुरा गर्छु भन्दै उनी आफ्नो घर गएकी थिइन्। तर एकाएक मृ’त्युको खबर आयो, उसलाई मारीएको हो। हैन भने भित्रबाट ढोका लक गरेको अवस्थामा लास किन भेटियो। सासुले सल काटेको भन्छन्। सल काट्’दा लाश भुइमा बजारिनु पर्ने? सलक्क ओछ्यानमा कसरी पुग्यो?’, उनले भने।
माओवादीका स्थानीय नेतासमेत रहेका दुर्गा सिंह लामाको छोरा भएकै कारण प्रहरीले लक्ष्मणलाई जोगाउन लागीपरेको माइती पक्षको आ’रोप छ। उनीहरु भन्छन्, मृ’तकको मोवाइल बरामद गरिएको छ। तर घ’टनाको १६ दिन पुग्दा पनि लक खोल्न सकिएन भन्दै कुनै जानकारी दिएको छैन।
यस्तै आरो’पीत लक्ष्मणले प्रयोग गर्ने मोवाइल पनि बरामद नगरिएको, घट’नाका सम्वन्धमा श्रीमान र सासुसँग कुनै वयान नलिएको माइती पक्षको आ’रोप छ।
अञ्जली गौतम मृ’त्यु प्रकरणमा अन्नपुर्णपोष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी हरि खतीवडासँग जानकारी मागेको थियो। उनले घट’नाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेको र प्रमाण पुगेपछि आरोपितलाई प्र’क्राउ गरीने जानकारी दिए।
पोष्टमार्टम रिर्पोट अहिलेसम्म नआएको बताउँदै खतिवडाले घट’नाको अनु’सन्धान भैरहेकाले थप जानकारी दिन नमिल्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘यस्तो घटनामा अनुसन्धान गर्न हामीलाई कानुनले २ वर्षसम्म समय दिएको छ। समयमै अनुसन्धान सक्छौं।’ ( अन्नपूर्ण पोस्ट बाट)
Prevश्रीमान घर फर्किदा श्रीमती ड्राइभरसँग टा प भएपछि श्रीमानले यस्तो ध म्कि दिए दुवैजनालाई (भिडियो हेर्नुस्)
nextश्रीमतीलाई डि भोर्स र सम्पत्ति फि र्ता माग्दा उल्टै यस्तो जवाफ दिएपछि श्रीमान हेरेको हेरै भए (भिडियो हेर्नुस्)